China Polyethylene Glyeol 1500 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Izicelo eziphambili:Amafutha, suppositories, cream.
Ngenxa yokunyibilika okuphezulu kunye noluhlu olubanzi lokunyibilika kwamanzi, kusetyenziswa wedwa okanye ukudityaniswa nezinye izinyibilikisi, i-polyethylene glycol 1000-4000 inokunceda ukufezekisa indawo yokunyibilika apho ixesha kunye nendawo yokugcina ihambelana neemfuno zamachiza kunye iziphumo zomzimba. Ukucaphuka okuvela kwi-PEG matrix suppository kungaphantsi kwento evela kwimatriki yeoyile yendabuko.
Indlela yokupakisha:Igubu leplastiki le-50kg
Beka ubomi kwishelufa: Iminyaka emithathu
Ukugcinwa kunye nokuthuthwa: Le mveliso ayinabungozi, ilangatye libuyisela, njengokuthunyelwa ngokubanzi kweekhemikhali, zitywinwe kwaye zigcinwe kwindawo eyomileyo.
I-Peg-1000, i-PEG-1500: isetyenziswa njenge matrix okanye igrisi kunye nesinyibilikisi mveliso kumayeza, kumalaphu nakwizinto zokuthambisa esetyenziswa njengezimveliso kwishishini lokutyabeka ukuphucula ukusasazeka kwamanzi kunye nokuguquguquka kwentlaka kunye nedosi ye-10-30% Inokuphucula ukunyibilika kweedayi kunye nokunciphisa ukungazinzi. Ilungele ngokukodwa iphepha eli-wax kunye neepinki zokuprinta. Ingasetyenziselwa ukulungelelanisa i-viscosity ye-inki kwi-inki ye-pen. Ingasetyenziselwa ukusasazeka kumzi-mveliso werabha ukukhuthaza ubunyani kunye nokusasazeka kokugcwaliswa kwekhabhoni emnyama.
I-Polyethylene glycol kunye ne-polyethylene glycol ene-acid ester isetyenziswa ngokubanzi kushishino lwezithambiso nakwishishini lamayeza. Ngenxa yokuthamba, ukufuma, ukunyibilika kwamanzi, ukunyibilika kwamanzi, i-hydrophilic njalo njalo. Amaqhekeza obunzima beemolekyuli ezahlukileyo ze-polyethylene glycol anokukhethwa ukuba atshintshe i-viscosity, hygroscopicity kunye ne-microstructure yemveliso.
Inkangeleko （25 ℃）
Indawo yokumisela ℃
Umxholo wamanzi （%）
1% Isisombululo samanzi）
Milky White eqinileyo
Ngokuphawula: inkampani yethu ikwabonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zeemveliso zothotho lwe PEG.
Egqithileyo IPolyethylene Glyeol 1000
Okulandelayo: I-PEG 4000 Polyethylene Glyeol 4000
IPolyethylene Glyeol 1000
I-PEG 600 Polyethylene Glyeol 600
IPolyethylene Glyeol 400
IPolyethylene Glyeol 6000